भगवानले होइन, भाइरससँगको यो लडाइँ जिताउने डाक्टर-नर्सले हाे – Health Post Nepal
२०७६ चैत २९ गते १८:३७
गत चैत २२ गते हेल्थपोष्टनेपाल अनलाइनमा छापिएको डा. सुबोधद्वारा लिखित ‘आबुई नि डाक्टर! यिनले त भाइरस ल्याउँछन्’ शीर्षकको आलेख पढेर मन निकै भारी भयो। समय कस्तो आएछ? विश्वभर आक्रान्त पारेको कोभिड-१९ को संक्रमण भोलिको दिनमा मानव सभ्यता नै के हुने हो अन्योल छ। यस्तो विषम परिस्थतिमा पनि मानिस कस्तो स्वार्थी बन्न सकेको? शायद, स्वार्थीपनाको भार खप्न नसकेर होला प्रकृतिले सजाय मानिसलाई दिइरहेको।
तेस्रो विश्वयुद्धमा राम्रो पकड जमाएको कोभिड-१९ दुश्मनले नेपालमा पनि केही मात्रामा आफ्नो सैनिक पठाइसकेको छ। यसपटक विश्वभरि नै सेनाको युद्ध नभई स्वास्थकर्मीको रहेको छ। करिब २०८ देशमा फैलिइसकेको यो अदृश्य शत्रुले विश्वभरबाट हालसम्म ८१ हजार भन्दाबढी व्यक्तिको ज्यान लिइसकेको छ भने १४ लाख मानिसलाई संक्रमित बनाएको छ। विश्व स्वास्थ संगठनले नेपाललाई कोभिड-१९ उच्च जोखिम देशमा समावेश गरेको भए पनि तुलनात्मक रुपमा अहिलेसम्म अन्य मुलुकभन्दा हाम्रो देशमा संक्रमितको संख्या न्यून छ भन्दा फरक नर्पाला। र, कामना गर्दछु कि यतिमै सीमित रहोस्।
मै हुँ भनेर तुजुक देखाउने शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई आछुआछु तुल्याएको छ। शक्तिमा प्रतिद्वन्द्वी भनेर चिनिएका मुलुकहरू एक-अर्काको सहयोगी भई पारस्परिक सम्बन्ध बनाउनतर्फ लागिपरेका छन्। हाम्रो देशमा संक्रमण फैलिन नदिन अन्य मुलुकबाट पाठ सिक्न सक्छौं। तर, यहाँ त पाठ सिक्ने र एक-अर्काको मर्म बुझ्ने त परको कुरा मौका छोपी कसरी आफू उँभो लाग्ने भन्ने सोचाइ भएका छन् भन्ने कुरा उक्त आलेखले प्रष्टाइदिएको छ।
सरकारको माथिल्लो ओहोदामा हैकम जमाएर बसेकाहरूले कोभिड-१९ को महामारीलाई त सम्पत्ति आर्जन गर्ने अवसरको रुपमा लिएको देखिएको छ। जनताको रगत-पसिनाले एक-एक सिक्का गरी तिरेको करको पैसाले खरिद गरेको कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा अनियमितता गर्न सक्ने ‘बहादुर’ देशद्रोहीको चौतर्फी विरोध गर्दा पनि निकम्मा सरकार ‘तँ कुटे जस्तो गर म रोएजस्तो गर्छु’ भन्ने स्वाङ पारेको देख्न सकिन्छ।
यदि पिपिइजस्ता अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री समयमै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उपलब्ध गराएको हुँदो हो त स्वास्थ्यकर्मीहरूमा त्यस्तो कमजोर मानसिकता हाबी हुने थिएन। संयमता अपनाउँदा त विकसित मुलुकको तक्मा भिरेका देशहरूमा समेत सयौं स्वास्थकर्मीले सहादत प्राप्त गरेका छन् भने एउटा सिटामोलको लागि त हामी अन्य मुलुकमा निर्भर छौं
अझ भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालका श्रीमानले पिपिई लगाएर समाजिक सञ्जालमा गरेको फोटो प्रदर्शनीले त स्वास्थकर्मीलाई नभई नेता र उनका भरौउटेलाई नै भाइरससँगको लडाइँमा परिचालन गराउँदा उचित देखिन्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि र संक्रमणका न्यून जोखिममा रहेका विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरू पिपिइमा फोटो खिचाई फेसबुकमा भाइरल बनाइरहँदा चोरको हातमा सातुको थैलो दिएझैं हुन पुगेको छ। यता चिकित्सकहरू अझ पनि पिपिई नपाएकोमा निराश छन्। उता जात्रा सुरू भइसकेको छ। अत्यावश्यक र संवेदनशीलता नै नबुझेको ठेकेदार नेता र खाने भनेपछि सडकको लागि ल्याएको अलकत्रा पनि बाँकी नराख्ने नेपालका कर्मचारीहरू देखेर हामी नागरिकहरू आजित भएका छौं।
यदि पिपिइजस्ता अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री समयमै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उपलब्ध गराएको हुँदो हो त स्वास्थ्यकर्मीहरूमा त्यस्तो कमजोर मानसिकता हाबी हुने थिएन। संयमता अपनाउँदा त विकसित मुलुकको तक्मा भिरेका देशहरूमा समेत सयौं स्वास्थकर्मीले सहादत प्राप्त गरेका छन् भने एउटा सिटामोलको लागि त हामी अन्य मुलुकमा निर्भर छौं। यस्तो भयावह परिस्थितिमा चिकित्सक तथा स्वास्थकर्मीको मनोबल कसरी बढ्छ? कोरोना राहत कोषमा भारी रकम जम्मा हुँदा स्वास्थकर्मीको मनोबल नभई घुसखोरी नेता र उसका आसेपासे कार्यकर्ताहरूको मनोबल बढ्नेतर्फ सचेत हुनैपर्छ।
अनि यस्तो नकच्चरो नेताको संरक्षण पाएको हाम्रो समाजमा रहेका व्यापारीले के बाँकी राख्ला त! मास्क र ग्यासको त मौज्दात राख्ने नै भइहाले नि। बल्ल-बल्ल आएको मौकामा पनि कालोबजारी नगरे छिट्टै धनी कसरी बन्नु त? त्यसपछिको अर्का टोली छन् सम्पन्न सर्वसाधारण। लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने परिवारको समस्याको समाधानको निम्ति सरकारले गरेको राहत वितरणमा सुनका सिक्री र हातमा आइफोन बोकेर गएको समाचार पनि सुनियो। सायद, बिलासी कुरामा पैसा खर्च भएर होला राशनको लागि राहत चाहिएको। नत्र त सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा राहत थाप्नु त्यो जति लज्जास्पद अरु के होला र? ‘सरकारले दिएको बेला जे पनि थाप्नुपर्छ’ भन्ने मानसिकता कहिले हट्ने हो? राहतको यो अवस्थाले फर्केर भूकम्पको समयमा पठाएको छ। राहतको लागि लुछाचुँडी, राहत लिनेको भन्दा दिनेको तमासा।
अहो! नेपाली समाजको नग्नता। अहिले पनि राहत नेताहरूको भोट बैंक सुरक्षित गर्ने अवसरको रुपमा दुरुपयोग गर्न थालेको छ। यस्तो चर्तिकलाले को नागरिकले सरकारको राहत कोषमा दान गर्न अग्रसर होला र? सबै तहका सरकार, नेताहरू समयमै विचार पुर्‍याऔं, मानवीयता जगाउने समय आएको छ, भ्रष्ट विचार र कर्म छोड्ने मौका दिएको छ।
अहिलेको परिस्थितिमा जताततैबाट मारमा परेका भनेको स्वास्थकर्मीलाई न त सुरक्षा सामग्री नै छ न त पर्याप्त उपकरण। भन्न त २५ लाखको बिमा गरिदिने भने तापनि त्यो यथार्थमा लागू हुन कष्टकर हुन्छ भन्ने कुरासँग खेलका पदक बिजेताले अहिलेसम्म पनि सरकारको मुख ताकिरहेका छन् भन्ने कुराले पुष्टि हुन्छ। यस्तोमा न उनीहरू हात बाँधेर तमासा हेरेर बस्न सकेका छन् न त मैदानमा उत्रिन नै।
देशभरिका धेरैजसो अस्पतालले बिरामी जाँच्न मानेनन् भन्ने कुराका समाचार आए। बिरामी जाँच्नु एक स्वास्थकर्मीको सामाजिक उत्तरदायित्व हो तर त्योदेखिबाहेक उनीहरूको पारिवारिक उत्तरदायित्व पनि हुन्छ। यो भन्दैमा घरमा क्वारेनटाइनमा बस्न भन्ने माग स्वास्थकर्मीको होइन। अब हतियार नै नभई कुन साहसका साथ मैदानमा उत्रिनु? पिपिइबिना उनीहरूले प्रदान गरिने सेवा दुस्साहस हुन्छ।
एक अध्ययनले देखाए अनुसार एक कोरोना संक्रमित व्यक्तिले एकपटमा कम्तीमा तीन हजार जनालाई सार्ने पाइएको छ। यसले गर्दा झन् धेरै जटिलता उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न। अनि उपचार गर्ने डाक्टर नै नभए च्याउ मौलाए जसरी मौलाउने अदृश्य शत्रुसँग लड्ने कसरी? रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउन आत्मबलले पनि सहयोग गर्दछ। तर, जहीँतहीँबाट निराशा जगाउने कार्य भएपछि कुन मनस्थितिले डाक्टर काममा अग्रसर हुने? भन्नेमा हामी पनि सहमत छौं। यति भनिरहँदा सामान्य मौसमी जरो, खोकी, निमोनिया लगायतका रोगीहरूको उपचार बन्द भइदिँदा अकाल मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ।
सामान्य र असामान्य बिरामीको पहिचान नै नगरी अस्पतालको ढोकैबाट ‘रिफर’ गर्ने व्यवहारलाई निको मान्न सकिन्न। चिकित्सकलाई हामी भगवानको अवतारका रुपमा लिन्छौं। पैसाकै कारण चिकित्सक भएका र पैसाकै पछि कुद्ने द्रव्यपिसाच चिकित्सकहरूका कारणमा पनि तपाईंहरूको सेता कोटमा काला धब्बाहरू नलागेको होइन।
सामान्य र असामान्य बिरामीको पहिचान नै नगरी अस्पतालको ढोकैबाट ‘रिफर’ गर्ने व्यवहारलाई निको मान्न सकिन्न। चिकित्सकलाई हामी भगवानको अवतारका रुपमा लिन्छौं। पैसाकै कारण चिकित्सक भएका र पैसाकै पछि कुद्ने द्रव्यपिसाच चिकित्सकहरूका कारणमा पनि तपाईंहरूको सेता कोटमा काला धब्बाहरू नलागेको होइन। तपाईंहरूका शत्रु तपाईंहरूभित्रैका त्यस्ता चिकित्सक र नाफाखोर निजी अस्पताल सञ्चालकहरू पनि हुन्। यतातर्फमा तपाईंहरूको प्रहार केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
त्यसको लागि स्वास्थ्यकर्मीको लागि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री मुखले होइन, व्यवहारमा पनि यथासक्य छिटो कार्यान्वयन हुन एकदम जरुरी छ। नत्र त यसको परिणाम इटालीभन्दा भयावह हुनेमा दुईमत छैन। लकडाउनको कष्टपूर्ण समयमा कालोबजारी गर्ने, मास्क र अन्य आवश्यक सामग्री मौज्दात राख्ने, राहतको नाममा गरिबको नाटक देखाउनेहरू, राहत सामग्रीको आसेपासेलाई वितरण गर्ने र राहत सामग्री नै आफ्नो घरमा कुम्ल्याउन पल्केका यी भ्रष्ट नेता, कार्यकर्ताहरूलाई पनि कारबाही नथालेसम्म कोभिड-१९ को भाइरसले भन्दा भ्रष्टाचार, नातावाद, फरियावादको भाइरसले देश खोक्रो बनाउने निश्चित छ। यतातर्फ पनि तपाईंहरूको कलम चल्न आवश्यक देख्छु।
आम नागरिकले अपराधीको व्यवहार हाम्रो लागि अहोरात्र खटिने स्वास्थकर्मीलाई होइन, समाजमा असली अपराधी ती हुन्, जो खाईनखाई जम्मा गरेको राहत कोष र राहत सामग्रीमा र्‍याल चुहाउँछ, गिद्धेदृष्टि लगाउँछ र सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि एक माना चामलको लागि असली पीडितको राहत खोस्छ। मनोबल उसको गिराउन जरुरी छ, जसले समस्याको बेलामा देशमा कालोबजारी गर्छ। धब्बा उसको चरित्रमा लगाउन जरुरी छ, जसले खोक्रो आर्दश बोकी सफेत कपडा ओढेर कालो मनले ओहोदामा बसेर देश र जनतामाथि गद्धारी गर्छ।
आवश्यक यो छ- जुन सिपाही युद्धको समयमा अन्तिम सास रहेसम्म लडिरहन्छ, त्यस्तो सिपाहीले वीरगति प्राप्त गर्दा सहिद भनी सम्मान गरिन्छ र इतिहासको पानामा नाम कोरिन्छ गालीका शब्द होइन। अहिलेको युद्धको सिपाही तपाईहरुजस्तो स्वास्थक्षेत्रमा नि:स्वार्थ रुपमा सेवा गर्नुभएका नर्स र डाक्टरहरूलाई भगवान भनी पुकारिनेछ। यो अदृश्य कोरोना भाइरससँग लडाइँमा जित मानव जातिकै निश्चित छ। विजयी उत्सव मनाउन मानव तम्तयार छ। त्यो जितको लागि हाम्रो साथ र सहयोग सधैं हुनेछ। तपाईंहरू जिम्मेवारीमा खट्नुस्। हाम्रो सलाम छ।
यो अदृष्य कोरोना भाइरससंग लडाईमा जीत मानव जातिकै निश्चित छ । विजयी उत्सव मनाउन मानव तम्तयार छ । त्यो जीतको लागि तपाईंहरुलाई हाम्रो साथ र सहयोग सधै हुनेछ । तपाईहरु जिम्मेवारी साथ खट्नुस् । हाम्रो सलाम छ ।
2 thoughts on “भगवानले होइन, भाइरससँगको यो लडाइँ जिताउने डाक्टर-नर्सले हाे”
Dr.Bhagwan Koirala Dr Niraj Pant hami ek khaladi hau tara manche bhachaune arkai khoi kheladi cha bhannu huncha bhujnai garo….
Dr. Duwal says:
सामान्य र असामान्य बिरामीको पहिचान नै नगरी अस्पतालको ढोकैबाट ‘रिफर’ गर्ने व्यवहारलाई निको मान्न सकिन्न। चिकित्सकलाई हामी भगवानको अवतारका रुपमा लिन्छौं। पैसाकै कारण चिकित्सक भएका र पैसाकै पछि कुद्ने द्रव्यपिसाच चिकित्सकहरूका कारणमा पनि तपाईंहरूको सेता कोटमा काला धब्बाहरू नलागेको होइन। तपाईंहरूका शत्रु तपाईंहरूभित्रैका त्यस्ता चिकित्सक र नाफाखोर निजी अस्पताल सञ्चालकहरू पनि हुन्। यतातर्फमा तपाईंहरूको प्रहार केन्द्रित हुन आवश्यक छ।….. man chhoyo